Yintoni iECN | Funda izibonelelo zoMthengisi we-ECN oyinyani
Yintoni i-ECN Trading Forex?
ECN, emele YoNxibelelwano lweeMtroniki, Ngokwenyani yindlela yexesha elizayo yeeMarike zoTshintshiselwano lwangaphandle. ECN Ingachazwa ngcono njenge bhulorho edibanisa abathathi-nxaxheba kwimakethi encinci kunye nababoneleli bayo abangamanani ngeFEX ECN Broker.
I-ECN isebenza njenge bhulorho phakathi kwabathathi-nxaxheba abancinci kwimarike kunye nababoneleli babo beenkcitho. Ikwabizwa ngokuba ziindlela zorhwebo ezizezinye (ATS), ECN sisiseko senethiwekhi ekhompyuter enika amandla urhwebo lweemali kunye namasheya angaphandle atshintshiselana ngokwendabuko.
Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba lonke utshintshiselwano lwenziwa ngesandla phambi kweminyaka yoo-1970, ngesixa esithile esimiselweyo sokurhweba nge-e-80s esikhoyo. Okwelo xesha, phantse lonke urhwebo lwe-elektroniki lwenziwa ngenkqubo yoqhakamshelwano yonxibelelwano oluphuhliswa ziiReuters, ezibizwa ngokuba ziiReuters Dealing.
Iinkqubo zangoku zokurhweba nge-elektroniki zaqala ukubakho ekuqaleni kwe-90s xa babeqala ukuthelekisa abathengi kunye nabathengisi ukuba babe lixabiso lemali. Ayisiyo yokuba iiNethiwekhi zoNxibelelwano nge-Elektroniki zazingekho ngaphambili; enyanisweni babekho ukusukela ngonyaka we-1960s kodwa babengasetyenziselwa urhwebo lwemali kude kube semva kwe-90s.
Izinto zokuqala kuqala-Yazi umrhwebi wakho
Imakethi ye-Forex kuthiwa yenye yezona ntengiso zaziwayo zabarhwebi abancinci. Apha, iingeniso zenziwe ukusuka kweyona ntengo incinci yokutshintsha kwamaxabiso kwizibini zemali. Kwaye ngokungafaniyo ukuthengiswa kwezabelo okanye izinto, ukuthengiselana ngemali kwangaphandle akwenzeki kuthengiselwano olulawulwayo.
Endaweni yoko, kuyenzeka phakathi kwabathengi kunye nabathengisi abavela kwiindawo ezahlukeneyo zehlabathi, ngentengiso engaphezulu kwe-the-counter (OTC). Kwaye, iya ngaphandle kokuthetha ukuba kufuneka usebenzise ibroker ukufikelela kule marike.
Ngenxa yesimo sayo esichongiweyo, ukukhetha umthengisi ofanelekileyo kunokuthetha umahluko phakathi kwempumelelo kunye nokusilela kumzamo wakho worhwebo lwe-Forex. Ngelixa kukho abathengisi abaninzi kwimarike enikezela ngeemveliso kunye neenkonzo ezifanayo, kuya kufuneka ukwazi ukubona iintlobo ezahlukeneyo zabarhwebi ngaphambi kokuqala urhwebo lwe-Forex.
Ngokukodwa, zimbini iintlobo zabarhwebi kwintengiso yorhwebo lwe-Forex: Abenzi beNtengiso kunye nee-ECN Broker. Njengoko igama libonisa, abaThengisi beNtengiso luhlobo lwabathengisi ababeka ibhidi kwaye babuze amaxabiso besebenzisa iinkqubo zabo ngokwenza 'ukuthengisa'. Amaxabiso awamisileyo aboniswa kumaqonga abo kubatyalimali abanokubakho abanokuvula kwaye bavale indawo zorhwebo.
I-ECN-Uhlobo 'olunyulu' lweBroker Broker phaya
Ngokuchasene nabaThengisi beNtengiso, i YoNxibelelwano lweeMtroniki (I-ECN) abarhwebi abenzi nzuzo ngakwicala lokusasazeka, kodwa babiza ikhomishini kwizikhundla endaweni yoko. Ngenxa yoko, ukuphumelela kwabathengi kukuphumelela kwabo okanye kungenjalo ngekhe babenako ukwenza nayiphi na inzuzo.
Abarhwebi beECN ziingcali zezezimali ezisebenzisa iinethiwekhi zazo zobuchule zekhompyuter ukudibanisa abathengi bazo nabanye abathathi-nxaxheba kwimarike. Ukudibanisa iikowuti kubathathi-nxaxheba abohlukeneyo, abarhwebi be-ECN bayakwazi ukubonelela ngebhanti ebukhali / ukucela ukusasazeka.
Ngaphandle kokusebenzela amaziko amakhulu ezemali kunye nabarhwebi beentengiso, abarhwebi beECN bakwanceda abathengi abathengisayo. Ii-ECN zenza ukuba abathengi bazo bathengiselane ngokuthumela amabhidi nokunikezela kwiqonga lenkqubo.
Umtsalane omnye we ECN Kukuba bobabini abathengi kunye nabathengisi bahlala bengaziwa kwiingxelo zorhwebo olwenziwayo. Ukuthengisa kwii-ECN kufana notshintshiselwano olwenziwayo olubonelela ngeyona ndlela ibiza / yokubuza amaxabiso kuzo zonke iikowuti zemali.
Ngee-ECNs, abathengisi bafumana amaxabiso angcono kunye neemeko zokurhweba njengexabiso eliphantsi njenge Umthengisi we-ECN Iyakwazi ukuvumela amaxabiso avela kubanikezeli beenkcitho ezahlukeneyo. Ngapha koko, imeko yezorhwebo ebonelelwe ngumthengisi we-ECN isebenza ngakumbi kwaye icacile, yongeza nangakumbi kwisibongozo sokuthengiselana nge-e.
Inzuzo ye-ECN-Kutheni kufuneka urhwebe nge-ECN Broker
Sebenzisa i Umthengisi we-ECN inezibonelelo ezahlukeneyo; Ngapha koko, inani elikhulu labarhwebi lijonge phambili kubarhwebi beECN, kwaye ngesizathu esifanelekileyo. Abarhwebi be-ECN banikezela uluhlu lweenzuzo eziphambili, ezinokubanceda ukuba bahambe phambi kwabakhokeli abakhokelayo. Nazi ezinye zeenzuzo eziphambili zokusebenzisa i-ECN broker.
Ukungaziwa, ukugcinwa kwemfihlo, kunye nokugcinwa kwemfihlo
Uhlala uyincwadi evulekileyo xa ujongene nokurhweba okuqhelekileyo kwe Forex. Nangona kunjalo, ubumfihlo kunye nokugcinwa kwemfihlo bacinga ngokubaluleka okuphezulu xa ukhetha ukuhamba ngendlela yomthengisi we-ECN. Inqanaba eliphezulu lokugcina iimfihlakalo kunye nokugcinwa kwemfihlo ngokuqinisekileyo linento yokwenza nokuba umrhwebi uya kusebenza kuphela njengendoda emarikeni endaweni yomenzi wentengiso.
Abarhwebi banikwa ukufikelela okungagungqiyo kumaxabiso entengiso ngearhente ye-ECN kunye neakhawunti ezinikezelweyo. Kuba amaxabiso ayahluka kunikezo, ibango, ukungazinzi, kunye nezinye iindawo zentengiso, ngokusebenzisa umthengisi we-ECN ochanekileyo, umntu unokurhweba ngebhaso ephantsi kakhulu / ukunikezela kusasaza.
Ukuphunyezwa koRhwebo kwangoko
Eli nqaku liyinto abathengisi be-Forex abaqhelekileyo abanakukwazi ukuyenza. Abathengisi be-ECN baqinisekisa ukuba ukusebenza ngokukuko kwezorhwebo kuqiniseke kakhulu kwindawo nganye. Obu buchule bokuthengisa abudingi ukuba umthengi athengise nomthengisi, kodwa endaweni yoko usebenzisa inethiwekhi yakhe ukubeka iiodolo. Le ndlela eyahlukileyo ngokwenene ivumela nabani na ukuba akonwabele ukuphuculwa korhwebo.
Ukufikelela kubathengi kunye noTywala
Iiarhente ze-ECN zisebenza kwimodeli evumela nangaliphi na lonke ithuba lokurhweba ngaphakathi kwichibi elinamanzi elipheleleyo lamazwe, elinokulawulwa, kunye namaziko emali afanelekileyo. Ukongeza, ngenxa yendlela ulwazi oluqhagamshelwe ngayo, ukungafihli sesinye isibonelelo esiphambili somthengisi we-ECN. Zonke iarhente ze-ECN zinikezwe ilungelo lokufumana idatha efanayo yentengiso kunye nokuthengisa; ke ngoko, ukucaciswa kwamaxabiso asisiseko kwintengiso avela kubanikezeli abaninzi bokuhlawula amatyala kuqinisekisiwe.
Izibonelelo zethu ezikhulu zomthengisi we-ECN kunye neakhawunti yokuthengisa ye-Forex edityanisiweyo kukungqinelana kwezorhwebo. Njengoko unikwe uhlobo lokurhweba nge-Forex, ikhefu alibalulekanga, kwaye ayiphindi yenzeke phakathi korhwebo. Xa uthatha ithuba lomthengisi we-ECN, ungarhweba ngokuqinisekileyo ngexesha leminyhadala kunye neendaba, kusenokwenzeka ukuba udale ukuhamba komsebenzi okwenyani. Oku kukwadala ithuba kuye nawuphi na umrhwebi lokuxhamla kumaxabiso e-Forex.
Ziziphi iinzuzo zeFXCC-ECN?
Umsebenzi we-ECN ungabonakali, oku kuvumela abahwebi ukuba baxhamle ixabiso lokungathathi hlangothi, ukuqinisekisa ukuba iimeko zemarike yangempela ziboniswa ngamaxesha onke. Akukho sikhokelo malunga nesalathiso sabathengi esekelwe kuzo: izicwangciso zokuthengisa zangaphambili, amaqhinga, okanye izikhundla zamashishini zangoku.
Abaxhasi be-FXCC-ECN bangakwazi ukurhweba phambili ngokukhawuleza, basebenzise amathuba okuphila, ukusasaza, amaxabiso angenakufezeka kwiimarike, ngokuqinisekiswa kwangoku. Imodeli ye-FXCC-ECN ivimbela ukuphazamiseka kwabenzi bemali, ngoko ke yonke imisebenzi ye-FXCC iyagqitywa kwaye iqinisekiswe ngokukhawuleza xa isetyenziswe kwaye izaliswe. Ayikho ideskithi yokusebenzisana ukungenelela, akukho naluphi na ukucaphulwa kwakhona.
Umxhasi, ukufikelela kwamanzi
Umzekelo weFXCC we-ECN unikezela abathengi ithuba lokuba bathengise kwi-pool yehlabathi jikelele yokuthengiswa kweemali ezilawulwayo, ezifanelekileyo nezikhuphiswano zemali.
Ukuzenzekelayo nge-forex yokurhweba / ukuthengwa kwedatha yemveliso
Ngokusebenzisa i-API ye-FXCC, abathengi banokuqhagamshela ngokulula i-algorithms yabo yokurhweba, abacebisi beengcali, imizekelo kunye neenkqubo zokulawulwa kwengozi kwimveliso yokutya yemarike ebukhoma kunye ne-injini ehambelana nexabiso. I-FXCC iyaphila, ingathathi hlangothi, idatha yeemarike ephumelelayo ifaka ibhanti ekhuphisana kakhulu kwaye icele amaxabiso atholakalayo nanini na ixesha kwiimarike. Ngenxa yoko inkqubo yokurhweba iyahlala ithembekile kwaye ihambelana xa ibuye iphinde ihlolwe imveliso yokuthengisa, okanye ukuthengiswa kokuphila.
I-FXCC ihluke kumthengisi okanye umenzi wemakethe njengoko i-FXCC ayiyikulawula i-bid / offer offer spread and therefore we can not offer the same bid / offer offer spread throughout. I-FXCC inikezela ngokusasazeka okwenyaniso.
Kwi-ECN, abathengi bancedisa ukufikelela kumaxabiso emarike. Amanani emakethe aguquka ukubonisa ukubonelela, ukufunwa, ukunyanzelisa kunye nezinye iimeko zemarike. Imodeli ye-FXCC-ECN yenza ukuba abathengi bathengise ukuthengiswa okunamandla / isibonelelo esisasazekayo, esinokuthi sibe ngaphantsi kombhobho omnye kwiindawo ezithile zemarike.
Vula i-Akhawunti ye-ECN yamaHlabathi namhlanje!
KWEHLABA Afghanistani Alibhaniya Aljeriya American Samoa Andorra Angola Angwila Antiguwa neBarbuda Argentina Armeniya Arubha Ostreliya Ostriya Azerbayijani Bhahamas Bhareyini Bhangladeshi Barbados Bhelarusi Belize Benin Bhermuda Bhutan Bolivia, State Plurinational ye Bhozniya neHerzegovina Botswana Brazil British Indian Ocean Territory Brunei Darussalam Bhulgariya Burkina Faso Burundi Khambodiya Khameruni Khanada Kheyip Verde Cayman Islands Iriphabliki yaseAfrika eseMbindini Tshad Chile iTshayina Cocos (Keeling) Islands Kholambiya Khomoros Khongo Congo, iDemocratic Republic of Isiqithi saseKhuk icosta Rica ECote d'Ivoire C te d'Ivoire Khroweyishiya Tyhubha Sayiprasi Umphakathi waseCzech Dominikha Jibhuti Dominikha ilizwe lasedominic Ekhuwado Egypt El Salvado Ekhwithoriyal Gini Eritrea Estoniya Yuthophiya Falkland Islands (Malvinas) Faroe Islands Fiji Finlend Fransi French Guiana French Polynesia French Southern Territories Gabon Gambiya Georgia Jemani Ghana Gilbhraltha Grisi Grinlend Grenada Guadeloupe Guam Guatemale Guernsey Guinea Guinea-Bissau Guyana Haiti Holy See (Vatican City State) Honduras Hong Kong Hangari Ayisilend Indiya Indoneshiya Iran, amaSilamsi Republic of Irakh Ayalend Isle of Man Sirayeli ElamaTaliyane Jameyikha Japhan Jersey Jordan Kazakhstan Khenya Kiribati Korea, Democratic Peoples Republic of Korea, kwiRiphabliki Khuweyithi Khirgizstan Lao People ye-Democratic Republic Lathviya Libhanon Lesotho Layibheriya Libyan Arab hiriya Likhtensteyin Lithuwaniya Laksembheg Macao EMakedoni, owayesakuba yesiYugoslav Republic of Madagaska Malawi Maleyishiya Maldivs mali Malta Isiqithi saseMashal Martinique Morithaniya Morishiyasi Mayotte Mekhsikho Micronesia, misebenzi ಮೆಟಾಡೇಟಾ Moldova, kwiRiphabliki Monakho Mongoliya Montenegro Montserat Morokho Mozambikh Myanmar Namibhiya Nauru Nephal elamaDatshi Netherlands Antilles New Caledonia Nyu Zilend Nikharaguwa Nayija Nayijeriya Niue Isiqithi saseNofolkh Isiqithi saseMariyana eseMantla Norowe Oman Phakistan Palau Territory namaPalestina, Uxakekile Panama Gini eNtsha yasePapuwa Paraguay Peru Filipayinzi Pitcairn Pholend Photshugo iPuerto Rico Khwatha Ukudibana kwakhona Romaniya IRussian Federation Rwanda Ingcwele iBarthlem Saint Helena, ezulwini kunye Tristan da Cunha Seyint Kitsi neNevis Seyint Lushiya Saint Martin (inxalenye French) Saint Pierre and Miquelon Seyint Vinsent neGrenadins Samoa San Marino Sawo Tome nePrinsipe ISaudi Arabia Senegal serbia Seytshels Sierra Leone Singapho Slovakiya Sloveniya Isiqithi saseSolomon Somaliya Mzantsi Afrika South okubhalwe emazantsi ephepha okungajikiyo Speyin esri Lanka Sudan Suriname Svalbard and Jan Mayen Swazini Swiden Swizalend WeRiphabliki yaseSyria Taiwan, kwiPhondo China Tajikistan Tanzania, United weRiphabliki Thayilendi East Timor Togo Tokelawu Tonga Thrinidadi neThubhago Thunishiya ikarikuni Turkmenistani Turks and Caicos Islands Tuvalu Uganda Yukreyini IUnited Arab Emirates iunited Kingdom Uruguay Uzbhekistan Vanuatu Venezuela, Bolivarian Republic of Viyethnam Virgin Islands, British Virgin Islands, US Wallis Futuna Western Sahara Yemen Zambiya Zimbabwe
IINKCUKACHA ZOKUVULA MANJE
Ukurhweba nge-Forex kuyingozi.
Unokulahlekelwa yonke imali yakho.